Ny fampiharana tsara indrindra hahitana ny toetr'andro amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Un iPad Azo ampiasaina amin'ny zavatra maro izy io: mampahafantatra anao ny vaovao manerantany, misintona fampiharana, milalao lalao, manampy anao amin'ny asa amin'ny alàlan'ny fampiharana, mahita ny toetr'andro ... Andao hifantoka amin'ny farany indrindra: jereo ny toetr'andro . Manana fomba 2 hijerena ny fotoana amin'ny iPad-nay: amin'ny alàlan'ny tranonkala na amin'ny alàlan'ny fampiharana ao amin'ny App Store.
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fampiharana lehibe hijery ny toetr'andro amin'ny iPad:
Amin'ny alàlan'ny fampiharana
Ny fotoana dia
El fotoana.es Izy io no eo amin'ny laharana voalohany ao anatin'ny Top Free amin'ny fangatahana toetr'andro maimaim-poana. Fa maninona no hisy izany? El tiempo.es dia manolotra antsika ny toetrandro ao toerana 200.000 XNUMX mahery an'izao tontolo izao. Afaka mahita sary radara isika, sarintanin'ny faminaniana, sary zanabolana, ankoatry ny zavatra hafa.
AccuWeather ho an'ny iPad
iray hafa free application fa tena mandaitra tokoa. Amin'ity tranga ity dia marihiko ity rindranasa ity ho an'ny endriny sy ny fampiasa ao aminy: hamandoana, mari-pana, vinavina, sarintany, horonan-tsary ary koa ny fomba fizaràny fotoana amin'ny tambajotra sosialy: Twitter, Email ... Raha ny tianao dia ny mahafantatra ny toetr'andro azo itokisana nefa tsy mila mandoa, ity no fampiharana anao. Afangaro ny asany sy ny endriny.
Efa naneho hevitra momba ity fampiharana ity izahay ao amin'ny Vaovao IPad. Izy io dia rindranasa miaraka amina endrika tsara fa tsy manana safidy maro izay, ohatra, manana an'i AccuWeather. Tsy noho izany antony izany dia tsy mila ao anatin'ny rindrambaiko tsara indrindra hahitako ny fotoana. Manamarika azy tsara ho fampiharana tsara ho an'ny famolavolana minimalista sy ny fihetsika ao anaty app.
Amin'ny alàlan'ny tranonkala:
Mampiasa tranonkala 1 aho hijerena ny toetr'andro any Espana:
AEMET: Ahitana ny ankamaroan'ny tanàna ao Espana miaraka amin'ny mety hijerena ny sarintany momba ny rotsakorana, ny maripana ambony indrindra sy farafahakeliny, taratra UVA… Recommended 100%
Ny fampiharana tsara indrindra ho ahy dia ny AccuWeather ho an'ny iPad. Ho anao, inona ny rindranasa tsara indrindra hahitanao ny ora amin'ny App Store? Mety miombon-kevitra amiko na tsia ianao fa safidiko io.
Fanazavana fanampiny - Apple mandefa ny fampielezan-keviny vaovao "Fa maninona ny iPad?"
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Ny fampiharana tsara indrindra hahitana ny toetr'andro amin'ny iPad
Beora dia hoy izy:
Ho ahy ny tsara indrindra dia ny Meteogram, tena tsotra sy hita maso. Heveriko fa voaloa io, fa amin'ny farany dia io ihany no ampiasaiko amin'ny iPad.
Mamaly an'i beor
Tiako ny Weathercube, io no ampiasaiko, nampidiniko izy io tamin'izaho maimaim-poana, fa raha hitako fa mandeha tsara io dia aloako, mendrika azy ireo izy ireo! 🙂
Ny marina dia eny, tsara izany, saingy tsy manana asa betsaka tahaka ny manolotra antsika AccuWeather na eltiempo.es
Fa mendrika ny lisitra nataoko izany, izany no nametrahako azy.
Izaho ihany no mampiasa azy io hahalalako ny ora an'i Badalona (tanànako) anio, rahampitso ary ny ampitso, tonga amiko 😛
Alejandro Movilla dia hoy izy:
Mampiasa tranokala (m.yr.no) avy amin'ny Ivotoerana Meteorolojika norveziana aho.
Ny% fahatokiana ananany dia tsy mampino
Manana safidy ianao hahita ny ora isan'ora na andro maromaro.
Valiny tamin'i Alejandro Movilla
Sary 4 1 teny, fantaro izay itovizan'izy ireo